၉၆၉ စတေဂါကို သော့နဲ့ထိုးခွာမိတာ.ထောင် (၂)နှစ်- ဆင်းတုတော်မျက်နှာ ဆေးနဲ့မှုတ်မိတဲ့ကလေးတွေ (၂)နှစ်စီ – အခု ၀တ်ပြုကျောင်းဆောင်/စာသင်ကျောင်း/သင်္ချိုင်းတွေဖျက် လူတွေကို လိုက်ပြီး ခုတ်ကြ/ရိုက်ကြတာ ညှိနှိုင်းနေတယ်တဲ့ – မင်းတို့လူမျိုးသိပ် တရားမျှတတဲ့လူမျိုးပါလား | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Home၉၆၉ စတေဂါကို သော့နဲ့ထိုးခွာမိတာ.ထောင် (၂)နှစ်- ဆင်းတုတော်မျက်နှာ ဆေးနဲ့မှုတ်မိတဲ့ကလေးတွေ (၂)နှစ်စီ – အခု ၀တ်ပြုကျောင်းဆောင်/စာသင်ကျောင်း/သင်္ချိုင်းတွေဖျက် လူတွေကို လိုက်ပြီး ခုတ်ကြ/ရိုက်ကြတာ ညှိနှိုင်းနေတယ်တဲ့ – မင်းတို့လူမျိုးသိပ် တရားမျှတတဲ့လူမျိုးပါလား
၉၆၉ စတေဂါကို သော့နဲ့ထိုးခွာမိတာ.ထောင် (၂)နှစ်- ဆင်းတုတော်မျက်နှာ ဆေးနဲ့မှုတ်မိတဲ့ကလေးတွေ (၂)နှစ်စီ – အခု ၀တ်ပြုကျောင်းဆောင်/စာသင်ကျောင်း/သင်္ချိုင်းတွေဖျက် လူတွေကို လိုက်ပြီး ခုတ်ကြ/ရိုက်ကြတာ ညှိနှိုင်းနေတယ်တဲ့ – မင်းတို့လူမျိုးသိပ် တရားမျှတတဲ့လူမျိုးပါလား
၉၆၉ စတေဂါကို သော့နဲ့ထိုးခွာမိတာ…ထောင် (၂)နှစ်….
ဆင်းတုတော်မျက်နှာ ဆေးနဲ့မှုတ်မိတဲ့ကလေးတွေ…(၂)နှစ်စီ…
အခု ၀တ်ပြုကျောင်းဆောင်/စာသင်ကျောင်း/သင်္ချိုင်းတွေဖျက်…လူတွေကို
မင်းတို့လူမျိုးသိပ် တရားမျှတတဲ့လူမျိုးပါလား………
ဇွဲကပင်တောင်က သင်္ဃန်းဝတ်လိုမျိုး….မစိုးရိမ်က အတုအယောင်လိုမျိုး
လားရှိုးက ကုလားပျက်လိုမျိုး…အတုအရောင်ကောင်တွေကို…လွှတ်ထား
ဘယ်နေရာ မီးပွားကျလိုက်သလဲ…ထလောင်တော့မှာပေါ့….
လူမျိုးတိုင်း/ဘာသာတိုင်းမှာ…လူကောင်းရှိသလို…လူဆိုးလဲရှိတယ်…
လူဆိုးတွေကို…စားဦးစားဖျားကျွေးပြီး ထိုင်ရှိခိုး…ဘုရားထူးနေတာ….
မင်းတို့လူမျိုး တမျိုးထဲရှိတယ်….
ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်း မဖော်ပြ။ ခိုက်ရန်ဖြစ်တဲ့အဆင့်သို့ လျှော့ချ။
ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ + အိမ် ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးကြောင်းရေးထား။
တိုင်းဒေသ၀န်ကြီိးချုပ်နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက #ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးနေ
အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခဲ့သူတွေကို #ညှိနှိုင်းနေရတယ်ဆိုကတည်းက သွားပြီ။
အရေးယူမှု ?။ အရေးယူရင်လည်း ထုံးစံအတိုင်း မွတ်စ်ကိုပဲလား။ ခဏစောင့်ကြည့်ရုံ။
ကဲ ရယ်ဒီ… မျိုးချစ်တွေ … အခြေအနေကို ခဏစောင့်ကြည့်၊
ဖမ်းတာ ဆီးတာရှိရင် ခဏရှောင် … နေ… ကြ
အဖမ်းအဆီးအရေးယူတာ မရှိရင် ဆက် … လှုပ် .. ရှား …. မယ်
နောက်ထပ်ဗလီတစ်လုံးဖျက်ဖို့ အသင့်ပြင် …. ထား
ဗမာပြည်မှာ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ကျူးလွန် အကြမ်းဖက်ရင် ဘယ်တော့မှ အရေးမယူဖူးဘူး။ ဒီအထာကို နပ်နေပြီး လူအုပ်ကြီးနဲ့ လုပ်စားနေတာလည်း ကြာပြီ။
လူသတ်ရင်လည်း အုံနဲ့ကျင်းနဲ့သတ်၊ မဖမ်းဘူး။ ဥပမာ မိတ္ထိလာ။ တောင်ကုတ်။ မီးရှို့အကြမ်းဖက်ရင်လည်း မြို့လုံးကျွတ်သာရှို့ မဖမ်းဘူး။ တရားခံတောင် မမိဘူး။ ဥပမာပေးရရင် တပြုံကြီး။
အေး … ယောင်လို့မှားလို့ အမောင်ကုလားတို့ သွားမလုပ်နဲ့။ မင်းတို့လုပ်ရင် ဆွဲစိခံရမကွဲ့။ မင်းတို့က ခံဖို့သက်သက်ပဲ။ မင်းတို့ မလုပ်ရင်တောင် လုပ်တယ် လက်ညှိုးထိုးပြီး ဆွဲစိဦးမကွဲ့။ သေချာရှောင်ပေးကြ တိမ်းပေးကြဦး။ အိမ်တွေ ဗလီလေးတွေ လာဖျက်ရင်လည်း သေသေချာချာလေး ဖျက်နိုင်အောင် ရှောင်ပေးလိုက်ကြပါကွယ်။ ခမျာတွေ မင်းတို့ရှိတော့ မျက်နှာ ဘာညာ ပူနေပါ့ဦးမယ်။
တော်ကြာနေ ဒီစာဖတ်ပြီး မွေယိုးကုလားဒေ … သောက်သံသိပ်ထွက်တယ်။ ဗလီလေးတစ်လုံးဖျက်ခံရတာကိုပဲ သောက်ဖြစ် သိပ်သည်းပြနေကြတယ်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ကုလားဒေကိုပါ ဖမ်းပစ်ကွားးးး ဆိုပြီး မြို့မေတ္တာရနေပါဦးမယ်။
ဒိုင်ဗားစတီးတွေ ဘာညာဆိုတာတွေ နားထဲအ၀င်ခံဖို့ monochrome သမားတွေ ခံနိုင်ရည် မရှိတာကို သိပြီးသားပါဗျာ။ ထုတ်မပြောလည်း သိနေကြပါတယ်။
ကျနော်တို့…ဘာကို မျှော်လင့်နေမိတာပါလိမ့်……
အရေးယူဖို့…ညွှန်ကြားမဲ့သူက….. ဗုဒ္ဓဘာသာ ……
ညွှန်ကြားချက်ကို ထပ်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်မဲ့သူက… ဗုဒ္ဓဘာသာ ….
ဖမ်းမဲ့..ရဲ က…. ဗုဒ္ဓဘာသာ ….
တင်မဲ့ တရားရုံး…တခုလုံးက… ဗုဒ္ဓဘာသာ …
တရားစီရင်မဲ့…တရားသူကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာ …..
အမှုကို တည်ဆောက်ပြီး…တရားစွဲတင်မဲ့ ဥပဒေအဖွဲ့အစည်းက… ဗုဒ္ဓဘာသာ ..
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာက…အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်မဲ့သူက ရှားမှရှား…
ကျနော်တို့ …ဘာကိုများ…မျှော်လင့်နေမိတာပါလိမ်……
မွတ်စလင်တွေဘက်က..စာနာသလိုလို…၂ဖက်ခွတဲ့ Status လေးတွေ….
စာနာတတ်သလို Status ကလေးတွေ ရေးတင်ပြီး…..သမာသမတ်ကျတဲ့သူ
အခု…တမင် သက်သက် ကြို တင်ကြံစည်ချက်နဲ့..သူတို့ ဘာသာဝင်တွေက
ဥပုသ်လကြီးမှာ…ကမ်းကုန်အောင် မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကို မွတ်စလင်တွေက
မကျေနပ်လို့ ရေးကြတာကို သူက ထိုင်ဒေါသဖြစ်ပြနေတယ်….
ကန့်ကွက်တယ်လို့ ရေးတာ မတွေ့ရသေးဘူး…..
မွတ်စလင်တွေ ရေးတာ သားတာကို သူက ဒေါသဖြစ်ပြနေတယ်…..
သူ့ Status..အောက်မှာ မျက်ဖြေလင်္ကာရေးနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေအများကြီးဘဲ…
သူတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး…အဲ့ဒီလို ခွတုတ်နေသူတွေ အများကြီး…..
အများကြီးတွေ့ရဦးမှာပါ…….
အောက်မှာ သူရေးထားတာလေး တင်ပေးထားတယ်…ဖတ်သာကြည့်လိုက်ကြပါတော့….
Paw Lwin feeling စပ်မြင်ကောက် with Paw Lwin and Paw Lwin.
NLD အစိုးရသစ်ရဲ့ ရက်၁၀၀စီမံချက်ထဲမှာမပါဘူး ဆိုတာကိုတော့
မွတ်စ်လင်မ် မုန်းတီးရေးသမားတစ်စုကို လက်သပ်မွေးပြီး
NLD အစိုးရ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလဲ သတိရနေဖို့လိုပါတယ်
အကြမ်းဖက်သူများကို ထိရောက်စွာအရေးယူမယ် လို့
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကတိပြုလိုက်ပုံက အားရကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်
ဟိုလူ့ကလော်တုပ် ဒီလူ့ပုတ်ခတ်နဲ့ ပါတ်ရမ်းနေတာ
ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ အကြံပေးချင်ပါတယ်
ကြာရင် ခင်ဗျားတို့မှာ မိတ်ဆွေရယ်လို့ကို ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး
ငပေါ်တောင် အတော်သောက်မြင်ကပ်နေပြီ ဆိုရင်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိကြဖို့ ရိပ်မိကြဖို့ ကောင်းပါတယ် နော့
ပြောမရ တားမရလဲ သဘောပါဘဲဗျာ
ပေါ်လူကြီးမင်းတို့က နေသာသပ လေညှာကပါ
← မျောက်ချုပ်မှူးကြီး၏ မာယာ
ဒီကောင်တွေက မေးနေတာမဟုတ်ဘူး အမှန်တရားကို သိချင်တာ မဟုတ်ဘူး စော်ကားနေတာ – များသွားပြီ စော်ကားနေတာလဲ များသွားပြီ ဒီမေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေနေစရာ မလိုဘူး – ခွေးစကားပြောလာတဲ့ကောင်တွေကို ပါးရိုက်ပေးမဲ့ လူပဲ လိုတယ် →
2 thoughts on “၉၆၉ စတေဂါကို သော့နဲ့ထိုးခွာမိတာ.ထောင် (၂)နှစ်- ဆင်းတုတော်မျက်နှာ ဆေးနဲ့မှုတ်မိတဲ့ကလေးတွေ (၂)နှစ်စီ – အခု ၀တ်ပြုကျောင်းဆောင်/စာသင်ကျောင်း/သင်္ချိုင်းတွေဖျက် လူတွေကို လိုက်ပြီး ခုတ်ကြ/ရိုက်ကြတာ ညှိနှိုင်းနေတယ်တဲ့ – မင်းတို့လူမျိုးသိပ် တရားမျှတတဲ့လူမျိုးပါလား”
Maung Maung sharedamemory.
ကဲအဖမ်းခံရတာ မွတ်စလင် တဲ့ဗျ
ဝေါမြို့နယ် ပဋိပက္ခ လူတဦးကို ထိန်းသိမ်း
ပဲခူးတိုင်း ဝေါမြို့နယ်မှာ သူရဲသမိန်ကျေးရွာသားအချင်းချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတဦးကို ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ထွေးက ပြောပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သူရဲသမိန်ကျေးရွာက ဘာသာရေးအဆာက်အဦတလုံး ဆောက်နေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇွန် ၂၃ ရက်နေ့ နေ့လယ်က ကျေးရွာသားအချင်းချင်း စကားများရာကနေ ဘာသာရေးအဆောက်အဦနဲ့ နေအိမ် ဖျက်ဆီးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ ဝေါမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား ဦးတင်ထွေးကပြောပါတယ်။
“အိမ်ကတော့ မပျက်သွားဘူး၊ မျက်နှာစာလောက်ပဲ။ အပေါ်က ပစ္စည်းတွေ အောက်ကို ပစ်ချပေါ့။ ဗလီအဟောင်းတလုံးရယ်၊ နောက် ဗလီလို့ သံသယရှိဖွယ် ဆောက်လက်စအဆောက်ဦရယ် ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။”
ပြဿနာကို စတင်တယ်လို့ သံသယရှိတဲ့ ကိုတင်ဝင်းခေါ် ရာရှစ်ဆိုသူကို လက်ရှိ ဝေါမြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ရဲအင်အားနဲ့ လုံခြုံရေးအင်အားချပြီးတော့ ခဏ ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ အရေးယူဖို့ကလည်း လူကလည်း ထောင်နဲ့ချီတော့ ဘယ်သူဖျက်မှန်းတောင်မသိဘူး၊ ဒီကိစ္စပြေပြေလည်လည်နဲ့ ဖြစ်သွားနိုင်အောင် ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ ညှိဖို့ တိုင်ပင်ထားကြပါတယ်။”
ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကိုတင်ဝင်းရဲ့ ဝဲဘက်ချိုစောင်းမှာ အနည်းငယ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ ယင်းကျေးရွာရှိ တိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူရဲသမိန်ကျေးရွာ ရွာသူရွာသားအချို့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲဒီနေရာကို တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတွေ သွားရောက်ကာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးနေပြီး တရား ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဖြစ်စဉ်ကို စိစစ်နေပြီး လက်ရှိအခြေအနေမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ.က ပြောကြားကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျနော်တို့…မျှော်လင့်ချက်တွေ…လက်မလွှတ်သေးပါဘူး…..
လက်မလွှတ်သေးလို့ဘဲ…NLD ..အစိုးရကို အရေးယူပေးဖို့အတွက်
ငြိမ်းချမ်းစွာ…အတူလက်တွဲ နေထိုင်နိုင်ပါတယ်….လို့…ယုံကြည်နေတုန်းပါဘဲ
မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့နေ့…ဆိုရင်တော့
ခင်ဗျားတို့ပါတီကို အဖက်လုပ် စကားပြောနေမှာ…မဟုတ်တော့ပါဘူး….
ဘာမှ တောင်းဆိုနေမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး….